गाउँमा ‘भान्जा आतंक’
नवराज कुँवर काठमाडौं, २८ साउन
म कसैको छोरा, कसैको भतिज, कसैको मामा अनि कसैको भदा । भोलि कसैको बाउ बनुँला, कोही मेरो भतिज बन्ला ।
अहिले भने मेरा अरु सबै नाता परिचय ‘भान्जा’ले अतिक्रमण गरेको छ । धेरैलाई मेरो नाम सायदै थाहा छ । उनीहरूलाई मेरो नामसँग मतलव छैन । धेरै गाउँमा म यो परिचयबाट अनुन्मुक्त छु ।
मावली गाउँमा त सबैले ‘मामा आतंक’ सहनैपर्छ । तर, मलाई ताजुब लाग्छ, मेरा मामा जुन जुन गाउँमा पुगेका छन्, ती सबै गाउँमा मेरा सबै खालको साइनो भान्जामा मर्ज भएका छन् ।
मेरा मामालाई चिन्ने जति सबैले मलाई भान्जा भन्छन् ।
मेरा कान्छा मामालाई चिन्ने छिमेकी गाउँको एक परिवारकी एउटी केटी मलाई असाध्यै मन पथ्र्यो ।
मैले ससुरा बनाउन चाहेका बूढाले मलाई भान्जा भन्न थाले । मैले त खासै वास्ता गरिनँ । तर, मैले मन पराएकी केटीले साँच्चै मलाई उसकै बाउको भान्जा र उसको दाजु मान्न थालिछे ।
मेरो घर र मावली घर भएको गाउँ एउटै हो ।
२०७० सालतिरको कुरा । एउटा कार्यक्रममा चर्चित हास्य टेलिशृंखला ‘मेरी बास्सै’का कलाकारहरू सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’, कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’, केदार घिमिरे ‘माग्नेबुढा’, गायक हिमाल सागर र डिजराज पौडेललाई रामपुर ठोक्सिला लगेका थियौं ।
कार्यक्रम सकेर बिदाइ हुने बेला हात मिलाउँदै धुर्मुसले भने, ‘ल भान्जा अब काठमाडौंमा भेटौंला ।’ डिजराजले त बिहानैदेखि भान्जा भन्न थालिसकेका थिए । ‘कुँवर काजी’ भन्दै जिस्किरहेका माग्ने बूढा पनि अन्ततः ‘ल भान्जाबाबु हामी लाग्यौं’ भन्दै गाडी चढे ।
सबैले भान्जा भनेको सुनेर उनीहरूले पनि भान्जा भने ।
धेरै खाएपछि चिनी पनि तीतो हुन्छ भन्छन् । भेटिए जति सबैले भान्जा भन्दा मलाई यो वकवाद लाग्न थालिसक्यो । मानौं, कुनै दुर्वचन ।
राष्ट्रियस्तरका कलाकारले गाउँलेका अगाडि भान्जा भन्दिँदा खुसी लाग्नुपर्ने हो । फेरि रिसाएर प्रतिक्रिया दिने कुरा पनि भएन । रुन्चे हाँसोका साथ मुन्टो हल्लाउँदै मैले उनीहरूलाई बिदाइ गरें ।
त्यसपछि रामपुरमा थुप्रै कार्यक्रम गरियो । जाने सबै कलाकारले भान्जा भनेर गए । डिजेदेखि टेन्टवालासम्मले ।
शब्दकोश पल्टाएर हेरें, कतै भान्जाको अर्थ अरू पनि छ कि !
‘दिदी वा बहिनीको छोरो । नन्द वा आमाज्यूको छोरो । लोग्नेको दिदीबहिनीको छोरो,’ शब्दकोशमा यस्तो लेखिएको रहेछ ।
अनि म कसरी सबैको भान्जा भएँ । न उनीहरू मेरी आमाको दाजुभाइ, न मेरा बाउ उनीहरूका ज्वाइँ वा भिनाजु । बाउलाई चाहिँ दाइ भन्ने अनि मलाई चाहिँ भान्जा ? यो कुनै तरिका हो ?
छिमेकी गाउँ सेतीखोला ५ किलोमिटरको दूरीमा छ । त्यहाँ मेरा कान्छा मामाका साथीले ‘म भान्जा’लाई भाइरल बनाए ।
त्यो गाउँमा जानै मन लाग्दैन, ‘सिँगाने’ बच्चाले पनि भान्जा भन्छन् । सुन्दरी केटीहरूको दाइको पनि भान्जा, बाउको पनि भान्जा ।
कक्षा १० मा पढ्दा ७, ८ र ९ मा पढ्ने केटाहरूले भान्जा भनेर बोलाउँथे । मलाई त भान्जा भने केही छैन । मेरो काकाको छोराको के गल्ती ?
उसलाई समेत गाउँभरिकाले भान्जा भन्छन् । उसको मावल अलि टाढै छ । उसका मामाका साथी पनि छैनन् रामपुरमा । तर, उसलाई तोते बोल्ने बच्चादेखि ६० नाघेका बूढासम्मले भान्जा भन्छन् ।
उसको कान्छो भाइको हालत पनि त्यस्तै छ । अगाडि त भन्दैनन् तर मनमनमा उनीहरू पनि मसँग मुरमुरिँदा हुन् । म भान्जा भएकाले मेरी बहिनी पनि सबैकी भान्जी । मेरा मिल्ने साथी जति सबैका भान्जा ।
स्कुलको पढाइ सकेर कलेज पढ्न काठमाडौं आइयो । अब ‘भान्जा’ सम्बोधनबाट मुक्ति मिल्ला भन्ने लागेको थियो । तर, मैले एडमिसन गरेको कलेजमा गाउँकै एकजना ‘मामा’ पहिलेदेखि नै अध्ययनरत रहेछन् ।
अब फेरि उनले कलेजभरिकै भान्जा बनाउने डर लाग्यो । मैले कलेज नै परिवर्तन गरें ।
म भान्जा शब्दबाट यति वाक्कदिक्क भएको थिएँ कि शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ ।
अर्को कलेजमा पढ्न थालें । त्यहाँ छिमेकी गाउँमा ‘लड्डु’ नामले परिचित एकजना मित्र पढ्दा रहेछन् । सुरुमा उनले ‘जी’ लगाएर कुरा गरे । दुईचार दिनपछि ‘मेरो दाइको भान्जा रहेछौ’ भन्दै भान्जा नै भन्न थाले ।
काठमाडौंबाट घर गयो, ‘भान्जा कहिले आएको ?’ जसले सोधे पनि पहिलो शब्द नै भान्जा । नजिकै भए पनि मेरा वास्तविक मामाहरूसँग मुस्किलले वर्षमा एकपटक बोलचाल हुन्छ । त्यो पनि दसैंमा ।
त्यतिबेला उनीहरूले मलाई भान्जा भन्दैनन् । नामले बोलाउँछन् । तर, तिनका साथीलाई के भा‘को ? मेरो नामै नभएजस्तो भान्जा भान्जा !
भान्जा भन्नेको नियतमा मेरो कुनै शंका छैन । तर, सबैले भान्जा नै भन्दा मभित्र प्रश्न उब्जिन्छ– के म कसैको भाइ होइन ? दाइ होइन ? भतिज होइन ? काका होइन ?
पीडित भएर होला, मैले भान्जा पर्नेहरूलाई पनि भान्जा भन्न छाडिदिएँ । उनीहरूलाई नामले बोलाउँछु । गाउँघरमा भान्जा आतंकले आजित बनेको म अर्को कुनै केटो यस्तो आतंकबाट गुज्रनु नपरोस् भनी ‘दुवा’ गर्छु ।
मित्र विशालले गुनासोको गाँठो फुकाइसकेपछि केहीबेर मध्य बानेश्वरको मिकेल ग्रिल रेस्टुरेन्टमा सन्नाटा छायो ।
भोलिपल्ट उनको अस्ट्रेलिया फ्लाइट थियो । अघिल्लो राति हामी त्यसैको पार्टीमा थियौं । देश छोड्नुअघि ‘भान्जा आतंक’ झेलेका विशालले आफूलाई हल्का बनाए । त्यो पार्टीमा पनि उनलाई भान्जा भन्ने मित्र दिनेश थिए ।
विशालले दिनेशलाई आज भान्जा भन्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।
‘भान्जा आतंकका कारण मैले गाउँ छोडें, कलेज छोडें, अब देश नै छाड्दै छु,’ विशालले यति भनेपछि हामी उनीतिर हेरेर धेरैबेर एकोहोरियौं । ‘साँची, म नेपाल फर्किंदासम्म ती सबै मान्छेले मलाई लगाउने साइनो बिर्सन्छन् कि बिर्संदैनन् होला है ?’
उनले यस्ताे प्रश्न गरेपछि हामी सबै हास्याैं ।
बिचरा विशाल भान्जा !
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २९, २०७६, ०२:३४:००